Lilolwe labekwa izembe ecaleni lakwaShembe
Bekulindeleke ukuthi siphume izolo isinqumo ecaleni lombango wobuholi bamaNazaretha ebeliseNkantolo yokuDluliswa kwamaCala eBloemfontein izolo. Isithombe: Facebook
THOKOZANI NDLOVU | November 8, 2019
SIGODLIWE isinqumo ecaleni lombango wobuholi bamaNazaretha ebeliseNkantolo yokuDluliswa kwamaCala eBloemfontein izolo.
Umbango uphakathi komholi waseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe noPhinda “Inkanyezi Yesithathu” Shembe waseThembezinhle ongene ezicathulweni zomholi osekhotheme, uVela "Imisebeyelanga" Shembe .
Ummeli waseThembezinhle, uMnuz Trevor Nkosi uthe abakalazi usuku okuzokhishwa ngalo isinqumo ngaleli cala, wengeza ngokuthi bakholwa wukuthi sizophuma ungakapheli lo nyaka.
“Bekucutshungulwa isinqumo seJaji * -Achmat Jappie elathi umholi osemthethweni nguVela Shembe owamenyezelwa wummeli esebenzisa incwadi eyasayinwa wumholi osekhotheme iNkosi Vimbeni Shembe uThingolwenkosazana ngosuku lokutshalwa kwayo. Akukho okusha okuvelile enkantolo ngaphandle kokucutshungulwa kokuqokwa komholi uVela Shembe okuvela ukuthi kwaba semthethweni. Akukho nokuncane okusethusile ngecala ngoba bekuvele kushiwo into esiyaziyo,” kusho uNkosi.
Uthe kuphinde kwagidwa entweni eyodwa yokuthi akukho lapho kuvela khona ukuthi iNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo eyamemezela uNyazilwezulu njengomholi yayigunyaziwe.
“Ummeli uZwelabantu Buthelezi owaba nobufakazi obuqinile bokuthi umholi ofanele yiMisebeyelanga ngoba wasebenzisa incwadi eyasayinwa wuThingolwenkosazana. Amajaji amahlanu abecubungula leli cala eBloemfontein akhombise ukuthi ahambisana nobufakazi bokuthi umholi ofanele owamenyezelwa wummeli uButhelezi njengoba engaphikisananga nokuthi isandla esasayina yisona esomholi owakhothama okwaphuma isinqumo ekuqaleni kuncike kulobu bufakazi. Ngemuva kwesinqumo samajaji konke obekuvaliwe ukuthi kusetshenziswe ebandleni kuzovuleleka ukuthi kusetshenziswe kuhlanganisa nemali esebhange elokhu yaboshwa kuqala icala ngo-2011,” kuqhuba ummeli.
Abanye abebesenkantolo baveze ukuthi bekukhona nommeli wabasekuPhakameni abafaka isicelo sokuthi bazosiza inkantolo ngokungachemi.
Ummeli wasekuPhakameni kuthiwa akukho okuqhamuke kuyena okuthathwe njengento ezosetshenziswa ecaleni lombango.
“Uze wabuzwa nokuthi izindleko zecala uzozikhokhelwa wubani njengoba eza nakho kungalithinti icala elisenkantolo. Uveze ukuthi akazozifuna kumuntu kodwa uqondene nekhasimende lakhe kuphela. Amajaji amcacisele ukuthi udaba oludingidwayo oluthinta umbango ophakathi komholi uMduduzi Shembe nomholi uVela Shembe akukho okunye azokuthatha okuvela eceleni. Uveze ukuthi ubezosiza inkantolo ngesinqumo ezosithatha kodwa amajaji akucacisa ukuthi awadingi sizo kulesi sinqumo,” kusho omunye wamalungu ebandla obesenkantolo.
Okhulumela abaseBuhleni uMnuz Thokozani Mncwabe uthe bazolindela isinqumo senkantolo.
“Noma sesiphumile isinqumo senkantolo, sisazophinde silindele nenkosi ukuthi yona ithini,” kusho uMncwabe.